श्री'मानको मृ*त्यु पछि झण्डै ८० पुरुषसँग यौ'न सम्बन्ध राख्ने यी युवती को हुन ? - सुदुर नेपाल
श्री’मानको मृ*त्यु पछि झण्डै ८० पुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध राख्ने यी युवती को हुन ?
काठमाडौँ । एक जना डाक्टरकी विधवा महिलाले श्रीमानको मृत्यु ८० जना विवाहित पुरुषहरुसँग ‘लसपस’ रहेको खुलासा गरेकी छिन् । ४३ वर्षकी लुइस भान डेर भेल्डेले हरेक दिन आफ्नो अन्तिम दिनजसरी दर्जनौँ व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार भ्यालेन्टाइन डेपछिको हप्ता प्रायः सम्बन्ध गुमेका मानिसहरुको लागि नयाँ सम्बन्ध खोज्ने समय भएकाले उनी व्यस्त हुन्छन् । उनले आफूलाई से’क्स थेरापिष्ट बताउँदै आफ्नो र ती विवाहित पुरुषबीचको चिटिंग सम्बन्ध थाहा पाए पनि उनीहरुका श्रीमतीहरुले सेक्स (यौ’न)कै कारण विरोध गर्न नसकेको बताइन् ।
मानिसहरुले आफूलाई धेरै सोच्न नहुने तर से’क्सचाहिँ धेरै गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । जीवन एकदमै छोटो रहेको भन्दै उनी से’क्सलाई एक जनासँग मात्रै सीमित गर्न नहुने सुझाव दिन्छिन् । उनी बेलायतको नर्थ योर्कशायरस्थित हारोटेजमा बस्छिन् ।
५०औँ वर्षसम्म एउटैसँगको शारीरिक सम्बन्ध एकदमै दिक्क लाग्दो हुने उनी बताउँछिन् । धेरैभन्दा धेरै पुरुषहरुले श्रीमतीलाई चिट गर्ने भन्दै उनले आफूले गरेको कार्यको बचाउ गरिन् । आफूले सम्बन्ध राखेकामध्ये सबै पुरुषहरुले श्रीमतीमाथि चिट गरेको उनले खुलासा गरिन् । एजेन्सी
Previous Post: लक डाउनको समयमा पनि उनी विन्दास छिन्
Next Post: संक्रमित बाँकेका आठै जना ! भारतबाट आएका थिए